Na Na Anya Lee - Otu nkeji ihe omume nwere ike ị na-aga n'ihu ma na-esote ọ na-agbadata ala. Companylọ ọrụ gị ga-anọrịrị na nche dị elu ma ọ bụrụ na ọchọrọ ịme ahịa azụmaahịa nke ọma. Nke a nwere ike ịgụnye ịtọ ntọala Google ma ọ bụ nyiwe mkpuchi akụkọ ndị ọzọ gbasara isiokwu ndị azụmahịa gị nwere ike ịchọ ikpuchi. Nke a ga - enyere akara aka gị aka izizi ozi banyere ọnọdụ na ihe ọhụrụ. Methodzọ ọzọ ga - eso ndị na - eme ihe ike ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nọ n'ọhịa gị nke ga - ekpuchi otu isiokwu dị ka azụmahịa gị. Y’oburu n’inweghi ike ijide ozi ohuru, odi n’onye mmadu na-eso; ma ị ka ga-enwe ohere iji ngwa ahịa azụmaahịa gị ọsọ ọsọ.